ခွေးစကားမပြောနဲ့…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ခွေးစကားမပြောနဲ့….
Posted by naywoon ni on Dec 16, 2011 in Drama, Essays.., My Dear Diary | 53 comments
အဆိုတစ်ခုကို ငြင်းပယ် ခြင်း
ခေါင်းစဉ်က နဲနဲ တော့ရိုင်းပေလိမ့်မယ်…။ မြန်မာ စကားရှိသား ….။ ထိမှနာ ဆိုတာ ……။ ဒါကြောင့် ခပ်စပ်စပ်လေး ပြောမလို့ဟာ…..။ မကောင်းပါဘူးဆိုပြီး တစ်ဆင့်လျော့ပေးလိုက်တာ…………။ လူဆိုတာ တိရစ္ဆာန်ထက်သာနေတဲ့ အချက်တွေထဲမှာ ဘာသာစကား ရှိမှုကလည်း ပါတယ်…..။ ဘာသာစကားသာမရှိဘူး….။ စာပေသာမရှိဘူး….။ လက်ကြောမတင်းတဲ့ စောက်ပျင်းတွေ အလုပ်ဆိုပြီး မလုပ်ခဲ့ကြဘူးဆိုရင် ခုနေခါ ခွေးလို အူတာရယ် ဟောင်တာရယ် မာန်ဖီတာရယ်လောက်ပဲ ရှိတဲ့ အဆင့်က လူတွေ တက်ကြဦးမယ်မထင်ဘူး….။
လူသမိုင်းအဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲ လာတာကလည်း စာပေကြောင့် မဟုတ်ရင် ဘယ်ဟာကြောင့်လဲ……။ နေ့စဉ်ဘ၀ ကနေ စာပေနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ဖယ်ကြည့် လိုက်စမ်းပါဦး ……။ ၀တ္ထု -ကဗျာ -သီချင်း -ရုပ်ရှင်… ဖယ်ထုတ်ထားလိုက်……..။ ဘာစာမှမဖတ်နဲ့ ………..။ ဘာမှမရေးနဲ့ ………။ အက္ခရာ စာလုံးတွေဆိုတာက ပညတ်ချက်တွေချည့်ပဲ ဆိုရင်…………။
စာပေထင်ရှားရှိခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်တောင် ပညာရေး စနစ်မှာ အမြှောက်အလီမရှိလို့ သူတစ်ပါးကျွန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဆရာကြီးဦးအောင်သင်းက ပြောခဲ့ သေးတယ်….။ စာပေသာမရှိ လူပျင်းအလုပ်မို့ သာ မလုပ်ခဲ့ကြရင် ကျွန်အဖြစ်က လွှတ်မြောက်ခဲ့ဖို့တောင်မမြင်…………။ လူတွေစိတ်ကို နိုးကြွစေဖို့ ထိုးင်းမှိုင်းသွားစေဖို့ စာပေက တတ်နိုင်ခဲ့လို့ “ ကလောင်သွားက ဓါးသွားထက် ထက်တယ်”ဆိုတာ ဘယ်နားသွားထားဦးမလဲ………။
အဲဒိတော့ကာ “စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာတွေဆိုတာက ငပျင်းတွေ လက်ကြောမတင်းသူတွေကွ” ဆိုတဲ့ အပြောဟာ လူသားမျိုးနွယ် တစ်ခုလုံးကို သိမ်းကျုံးစော်ကားလိုက်သလိုပါပဲ…။ ဒင်းကိုယ်တိုင်ကကော ဒီဆိုဒ်မှာ စာရေးနေတာပဲ မဟုတ်လား….။ ဒီလို ပြောရင် ဒီလိုပြန်ပြောမဲ့သူတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ တွေးမိမှာပါ….။ ပွဲဆူအောင်လှန့်တယ်ဆိုရင်လည်း ဆူသထက်ဆူအောင်လုပ်ပေးရပေမပေါ့…….။
လူမှာ လက်ရုံးရည်ရှိဖို့ လိုအပ်သလို နှလုံးရည် ပြည့်ဝဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်…။ ဒါကြောင့် စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာဆိုတာတွေ ရှိနေရတာပဲ…။ သူတို့ရှိနေလို့ စာပေအက္ခရာတည်မြဲနေတာပါ…။ သူတို့တွေ သာမရေးခဲ့ကြရင် ငပျင်းအလုပ်ဆိုပြီးမလုပ်ခဲ့ကြရင် ကျောင်းတွေမှာ ဒီနေ့လို့ သင်စရာ စာရှိလိမ့်မယ်မထင်…။ အရက်သောက်တာ ဆေးစွဲတာကတော့ ကျန်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းထဲမှာလည်းရှိတာပဲ…။ သူ့ရေးတဲ့စာနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ခွဲခြားကြည့်ပေါ့….။
စာရေးတဲ့သူရဲ့ စေတနာ ဟာသူ့စာထဲမှာပေါ်လွင်ပါတယ်…။ စေတနာမပါတဲ့သူ စေတနာမမှန်တဲ့သူရေးတဲ့စာဟာ ခဏနဲ့ လျောကျသွားမှာပဲ….။ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ ကိုယ်သိတာကို မျှဝေ သင်ပြပေးနေတဲ့သူတွေကို ခွေးစားပြောပြီး ၀ါးလုံးရှည် ချီးသုတ်ရမ်းပြီး မစော်ကားပါနဲ့….။
အဆိုတစ်ခု တင်လာပြီဆိုရင် ထောက်ခံတာနဲ့ ငြင်းပယ်တာက ကြုံရမှာပဲ…။ ကိုယ်တင်သွင်းလာတဲ့ အဆို အလေးအပေါ့ပေါ်မှာ လိုက်ပြီး အပြင်းအထန် ငြင်းဆန်ခြင်း …။ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ထောက်ခံခြင်းဆိုတာ ကြုံရမှာပဲ …။ ဒီဒဏ်ကို မခံစားနိုင်ရင်တော့ ဘာအဆိုမှ မတင်ပြနဲ့တော့………..။
ဒီလိုရှိတယ် ဘိုနီ ရဲ့ 
ဒီအသိုင်းအဝိုင်း ကို ဝင်ချင်တာလား ၊ တစ်ကယ်ဘဲ ပုတ်ခက်ချင်လို့ လား
လားပေါင်းများစွာ နဲ့ ဖြစ်ရအောင် ကို ဥာဏ်တုံးတာလား ၊ မိုက်ရိုင်းစော်ကားတာလား တော့
အသေချာဆုံး ၊ သူ့ ကို ပြန်ပြောသင့်တဲ့ စကားကတော့
“ ခွေးစကား မပြောနဲ့”
ကျုပ် က ထပ်တိုးရေးချင်တာက
“ ခွေးလို ပတ်မကိုက်နဲ့”
ခွေးနဲ့တောင် နှိုင်းရမှာ ခွေးဘက်ကတောင် နာပါသေးတယ် … ။ ခွေးတွေထဲမှာတောင် အရမ်း သိတတ်လိမ္မာတဲ့ခွေးတွေရှိတယ် … ။
သူ့ကိုပြိုင်မပြောပဲ … ဥပက္ခာပြုလိုက်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် … ။
ကိုနေလုံးကြီး ပြောလိုက်တာလဲ ဒက်ကနဲ ဂွက်ကနဲ ကိုမှန်သွားတာပဲ…
ထားလိုက်ပါ သည်ပို့စ်အတွက် အချိန်ကုန်ခံမနေပါနဲ့.. လမ်းကျဉ်းထဲကနေ လှန်းဟောင်တဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ကို မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဆက်သွားလိုက်ပါဗျာ…
အဲ့သလို ရဲရဲတောက်တဲ့ အရေးအသားတွေကို ကြိုက်တာ …
ဟုတ်တယ် အဘနီရေ့ ….အပြည့်အ၀ (ဂွင်းစဂွင်းပိတ်)ကို
ကျုပ်လည်း တခါမန့်ဖူးပါတယ် …ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကြီးသာ
ချမ်းသာရင် ဆြာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ တက္ကနစ်ရှင် မာကတ်တာ
အားလုံး နိုင်ဂံခြားက အင်ပို့ လုပ်ယူလို့ရတယ်. ….
ကိုယ့်လူမျိုး …စာပေ ဂီတ ရုပ်ရှင် အနုပညာရှင်တွေ သာ
မရှိရင် အော်တိုမက်တစ် ကျွန်ဖြစ်ရတာ ကလွဲရင် ဘာရှိဦးမလဲ…
မလေး အင်ဒို ဗလက်ချိုက် တို့လို ကိုယ်ပိုင် စာလုံးမရှိလို့
အင်္ဂလိစာလုံးနဲ့ ကိုယ့်အသံထွက် ရေးနေရတဲ့ ကောင်တွေထက်
ကျုပ်တို့ သာအောင် လုပ်ကြရဦးမှာပဲ …
ကျုပ်တို့ စာပေကို ထိန်းတဲ့ဘက်ကလည်း ထိန်း …
innovate လုပ်တဲ့ဘက်ကလည်း လုပ် သည်လိုပဲ ဖော်ဆောင်သွားရမှာဘဲ..
သည်ခေတ် သည်ကာလကြီးမှာ သည်လို
“စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာတွေဆိုတာက ငပျင်းတွေ လက်ကြောမတင်းသူတွေကွ”
လုပ်ရင်တော့ မီးဒုတ် ဗျ မီးဒုတ်………..
ဆြာ ဆွ စကားလေး ထပ်ငှားသုံးလိုက်ဦးမယ်…
“ခွေး”ဖြစ်မှတော့ “တော်သလင်း”မှာ ဂဲထုခံရတာ မဆန်းပါဘူးလေ….
ဘုန်းကျော်သည် သြစတျေးလျနိုင်ငံတွင်နေသည်။ ၁၉၇၉-ခုနှစ်တွင် အင်းစိန်မြို့ တွင်မွေးပြီး မင်္ဂလာဒုံမြို့ နယ်ရှိ စစ်တပ်ထဲတွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ အဖေဖြစ်သူသည် တကြပ်ကြီးတဦးဖြစ်သည်။
အောက်လမ်မှ့ ထွက်၍ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင်ဖြင့် လုပ်စားနေတယ် ပြည်ပမှာ၊သူ့မိသားစုကို
သူတောင်းစား ခွက်ပြည့်ရင် စမာန်တက် တယ် တဲ့
အလို.ပဲဖြစ်သင်.တယ်…အနော်တို.ရွာသားတွေ လက်ရုံးရည်ရော နှလုံးရည်ရော ရှိ
ဝိုးအူး ဝုတ်အူး ယေးယေ့ ဂိန်ညောင်ညောင် …. I love you more than I can say……
““ကိုအင်ရေ…မီးဒုတ်ရှိရင် မီးတို့ပေးဘို့ အသင့်ပဲဗျ ကျုပ်မှာ မီးခြစ်ရှိတယ် ”””
အပြင်ဆိုင်(ရေသန့်ဗူးထောင်ထားတဲ့ဆိုင်)က ၀ယ်လာတဲ့ တစ်ဂါလံ (၄၀၀၀ိ/-)နဲ့ ၀ယ်လာတဲ့
တန်လိုက်တာနော် .. နယ်မှာ ၄၆၀၀ ဖြစ်သွားပြီ ..
ကျွန်တော်ကတော့ သိပ်မနာပါဘူး .. ဘာလို့ဆိုတော့ ရေးတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလဲ စာရေးဆရာ(စာရေးသူ)ပဲကိုး ….။ သူ့အဆင့် သူသတ်မှတ်တာလို့ပဲ ထင်ပါတယ် …။
အဘနီ အရေးအသားကို ကြိုက်တယ်ဗျာ၊ ကျနော့်စိတ်ထဲ ဒီလူ့အရေးအသားဖတ်ပြီးကတည်းက ပြန်ရေးချင်တာ၊ မရေးတတ်လို့ဗျ၊ အခုလို အဘနီကရေးပြလိုက်တော့ လွှတ်ကောင်းဗျာ……….
လူဆိုတာလူလို “သိ” မှ၊ လူလို “နေ” မှ လူ “လို”ပြောမှ လူဖြစ်တာ။ဒါတောင်သာမန်အဆင့်နော်။
လူ တကယ်ပီသဘို့ဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရေကြည်ရာမျက်နုရာ ရှာနေရုံနဲ့ကို မပီးသေးဘူး။
ထားတော့ လူ “လို” မပြောတတ် မဆိုတတ်နဲ့ စာပေ ကို လာစော်ကား လူမျိုး ကိုလာစော်ကား
“ချီးစားတတ်တဲ့အကောင်မျိုးပေမဲ့သခင်ကို သိတတ်သော ခွေး “တို့နဲ့
တောင်မနှိုင်းစေချင်ပါ ကိုကြီးနေဝန်း ရေ။ ခွေးတွေကိုသနားလို့။
ကစ်သိုတောင် right answer ဖြစ်လျက် …
အနီကတ်တွေ ခဲနေအောင် ပြခံထားရပါပေါ့လား ….
(အဘနီ ပိုစ့်ကိုပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော…
သဂျီး …အဲသည့် ငတိသည်နေ့လည်း ၂ပိုစ့်တင်ပြီး အကဲစမ်းထားသေးတယ်နော..
လစ်ဘရယ်လ် တွေဘာတွေ လာမပြောနဲ့ဦးဗျ…..ပွဲဆူအောင်လုပ်ရင် .. ရွာမှာလူစည်ရင်
သဂျီးကြိုက်တာပဲလားဗျာ??ဒါက သဂျီး မျှော်မှန်းချက်လားဗျာ …??
ကျုပ်ကို အဲ့လို ထင်သွားအောင် မလုပ်ပါနဲ့ဗျား…
အနှီငတိရဲ့ ပထမနေ့ ပို့ စ်တွေမှာ အကောင်းအောက်မေ့လို့ သဂျီးလည်း အကောင်း ၀င်ရေးခဲ့သေးတယ်မလား…
ကြာလာတော့ ဘာဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်ဟုတ်?? ကောင်းပြီ ၁ရက် …နောက်တရက်စောင့် နောက် ပိုစ့် အသစ်၂ခု
တက်တယ်. ..ဘာတွေလည်း သဂျီး ဖတ်ပြီးလောက်ပါပြီ ……
ဆိုတော့ … သည် ၄၈နာရီကြားမှာ တခြားပိုစ့်တွေမှာ သဂျီး ၀င်ဝင်မန့်နေပုံထောက်ရင် …
ဒါဟာသဂျီး ဖတ်ဖြစ်နေ ကြည့်ဖြစ်နေတာလမှန်းလို့ရတယ်ဗျ. ……တခါတခါ
currently online မှာ kai ဆိုတာကြီးပေါ်နေတာတို့ အပါအ၀င်ပေါ့ ..ဗျာ
ဘုရ်ှလည်း အဖမ်းခံထိဖူးတယ်. ..သူ့သမီးတွေလည်း အသက်မပြည့်မီ အရက်ဝယ်လို့ ဒဏ်ရိုက်တယ်ဆိုလား…
သဂျီးညွှန်းလို့ ဖတ်ရတာတွေ ပြောပါတယ်..ဗဟုသုတ တိုးပွားလို့ ကျေးကျေးပါ…
သို့သော် သည် ငတိကျတော့မှ .. သဂျီးနှလုံးပြူး ဘာလို့ မီးမကူးသလဲ သိချင်စမ်းဘာဘိ…
အတို့အထောင် မလုပ်စေလိုပါ။ ကျေနပ်မှုမရှိတိုင်း ဖြုတ် သတ် လုပ်ချင်ပါလျှင်
ကိုယ်ပိုင် ဝက်ဆိုဒ် ထောင်ပါရန် အကြံပေးလိုသည်။
ရွာထဲလူစည်အောင် အဲဒီအပေါစားနည်းနဲ့တော့ မလုပ်သလို ကြိုက်လည်းမကြိုက်ပါဘူး..။
လူစည်ရင်… ဆာဗာကြေးအပြင်.. ပွိုင့်ပေးလာတာတွေတက်မှာကိုး..
အခုတောင်.. တချို့ရက်တွေများ တရက်မန့်တဲ့နှုန်းအရင်ထက် ၂ဆဖြစ်လာနေလို့.. တခုခုအတွက်စီစဉ်စဉ်းစားနေပါတယ်..။
ရွာထဲက.. စာတွေ..မန်းတာတွေ အားလုံးတန်ဖိုးရှိတာတွေပဲဖြစ်စေချင်တာပါ..။
ဖွလို့.. ပွပြီး..ပြန်ရေးနေတာတွေကို.. ပွိုင့်မပေးချင်ပါဘူး…။
သဂျီး သဂျီး ..
လစ်ဘရယ် ဆိုတိုင်း ကျုပ်တို့ လူမျိုးက လမ်းပေါ်တက် ..ဆေးရိုးလှမ်းတာကလား …
ကျုပ်တို့ အမျိုး ..ခင်ဗျားတို့ အမျိုး တွေအပါအ၀င် အတော်များများက
ဒီမို ကရေစီ ရရင် လမ်းပေါ်မှာ အရက်သောက်လို့ရမယ် ဖဲရိုက်လို့ရမယ်
အ၀ှာ ကိစ္စ ..တရားဝင် ပေါ်တင်ဆောင်ရွက်လို့ရမယ် ဒါမျိုးတွေထင်နေကြသေးတာအများသား ……
ဆိုတော့ ….ဘယ်သူရေးတာလည်း …မမေးနဲ့ ဘာရေးတာလဲပဲ မေးကြေး …စာသားအရဆို
စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေ စီ စနစ်
ဆိုတဲ့ စာသားကို ကျုပ်တော့ သိပ်ကြိုက်တာပဲ …ရေးတဲ့လူကို ထောက်ခံတာမဟုတ်ဝူးနော…
စာသားကို ကြိုက်တာ …သည်တော့
ရွာ ပို သန့်ချင်ရင် ပိုစည်းကမ်းကိုင်..
မူနဲ့ မညီလို့ကတော့ ကန်ထုတ်ပစ် …
ငါသူတပါး ယောက်ျား မိန်းမ မရွေး …
ဆာဗာရော ပွိုင့်ပါ …. အနှစ်သာရ ရှိတဲ့စာ
ရေးတဲ့လူကို ပဲ အနှစ်သာရရှိရှိ အကုန်ခံစေချင်တယ်ဗျာ
အကောင်းရေးရင် ပွိုင့်ပေးမယ် …အေး ..ထိုနည်းတူစွာဘဲ..
ပေါက်ပန်း ၄၀ ရေးရင် တစုံတရာ ပယ်နယ်လ်တီ ထိမယ်….
ဒါမျိုး ချပစ်ဗျာ …လူမလာမှာ တော့ မပူနဲ့ သဂျီးရယ်…
တီချယ်ကြီးတို့ ကစ်သို တို့ ဦးဆောင်သော အကောင်းဘက်က ထောက်ပြ သင်ကြား
နည်းနာ ပေးနေတဲ့ စာရေးသူတွေ ရှိလို့ ….၀င်လာမစဲ တသဲသဲ ဖြစ်နေဦးမှာဘဲ …
(လိုအပ်ရင် …အဲ့သည့်အချိန်ကျမှ မားကတ်တင်းသုံးမယ်ဗျာ…)
ခုအချိန်ကတော့ …. ကိုယ်ရည် စစ်ဖို့ ပါဘဲ ….
ကျုပ်ပါ ၆၃မကျဝူးထင် ကန်ထုတ်ပစ်ဗျာ …ကြာတယ်..
ရွာထဲ မထော်မနန်းတွေ တွေ့တော့လည်း လှည့်ပတ်ဆဲမိတယ်သဂျီးရေ့…
တခုတော့ အဆိုပြုပါရစေ ….
ဆဲဆိုခြင်း အနုပညာ ဆိုပြီး ပိုစ့် အသစ်ရေးကြည့်ပါ့မယ် …
သဂျီး အကိုးအကားပြုတဲ့ အန်တီကြီးရဲ့ အဖေ တောင် …အတော်အဆဲသန်တာကလား..
သို့သော် … မြင်ရာ ငါ နဲ့ ကိုင်တုတ်နေတာမဟုတ် …လ အက္ခရာ ဂါထာလိုရွတ်နေတာမဟုတ်..
ကြက်သီးထစရာ ..သမိုင်းဝင် အကြောင်းတရားများစွာကို စကားလုံး ကြမ်းကြမ်းများဖြင့် ..
ခပ်သော့သော့ ရေးဖွဲ့ခဲ့တာချည်း … စကားလုံးဆိုလို့ ပြောရဦးမယ်….
စကားလုံးရဲ့အား ..ဌာန် .. မာန် …ပြင်းပြမှု …စေတနာ .. ဂရုဏာ ဒေါသော ..
ဒါတွေဘက်ကနေပြီး ပြောင်မြောက်တဲ့ သမိုင်းဝင် ဆဲဆိုချက်များဆိုပြီး ……..
သည်နှစ်ထဲမတော့ သိပ်ရေးနိုင်တော့မည် မထင်ပါလေ….
ko inz@ghi ရဲ့ ရေးသားပုံက ဒေါသသံ ရှိနေတယ်
ဂဇက် မှာ ပို့စ်တင်ဖို့ ဂဇက် အရည်အချင်းစမ်းသပ်ရတော့မလိုလို
အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ လုပ်ရတော့မလို ဖြစ်နေပီ
စာအရေးအသား လေ့ကျင့်သူတွေ စာသင်သား အသစ်တွေ
ဝေးရာသို့ သွားရတော့မှာလား ကိုကိုဂီရယ် ။
အစွန်းရောက် တွေအတွက်ပြောတာပါဗျာ …
ကျုပ်လည်း ရေးနေတာပဲ ..ခင်ဗျားလည်း ရေးနေမှာပဲ…..
အရည်အချင်းဆိုတဲ့စကား ကျုပ် မသုံးနှုံးထားပါဘူး…
အဘနီရဲ့ သည်ဆောင်းပါးမှာ ညွှန်းထားတဲ့ ..
အနှီ မူရင်းဆောင်းပါးရှင်ရဲ့ အခြားသော ပိုစ့်တွေကိုလည်း
ဒေါသဂိုဏ်း သင့်တယ်လို့တော့ မှတ်ဖူးသဗျ…
အဲ့စာတွေ သွားဖတ်ကြည့်ပါလေ. ..
ကျုပ်တို့ ရေးတာ မန့်တာ တွေက ဒေါသဂိုဏ်း ဘာကြောင့် သင့်သလဲဆိုတာ …
ကျုပ်ေ၇းတဲ့ စာတွေလည်း ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်ဗျာ …..
ပွိုင့်တွေသိပ်များနေရင် မသိအောင် လျော့လိုက်ပေါ့ သဂျီးရယ်။ သိသွားတော့လည်း ပြန်ပေးလိုက်။ ဒါလေးများ ဥနှောက်ခြောက်ခံ စဉ်းစားနေရတယ်လို့။ ကြီးပွားအုံးမယ် ဒီပုံနဲ့……
ဟုတ်တယ်သဂျီးရေ ၊အဲဒီကိစ္စကျနော်ဆွေးနွေးချင်နေတာ၊ မူအရ စာဖတ်သူများအကျိုးရှိတဲ့စာမျိုးမန့်ရမှာပါ၊ ဒါပေမဲ့ စာရေးသူချင်း၊မန့်သူချင်းရင်းနှီးမှုနဲ့ နှုတ်ဆက်ကျီစယ်ခြင်းမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်၊ ဒါကိုတော့ တားလို့မရပါဘူး။ မကြိုက်ရင်အော်ကြတာတွေလည်းရှိမယ်၊ အော်ပါစေ၊သို့သော် ပွိုင့်ပေးတာကိုတော့ အပေါ်မှာရေးထားတဲ့ စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြံပြုဆွေးနွေးချက်မျိုးကိုသာပေးရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပြောလို့သာပြောရတယ် ကျနော်ရေးထားတဲ့ ပို့စ် ကိုက အကျိုးမရှိတဲ့စာတွေ ပါနေပါတယ်။
အဲဒါမျိုးတွေ ပွိုင့်မပေးလဲ ရပါတယ်၊ ကျနော်(တို့) ရေးကတည်းက ပွိုင့်လိုချင်လို့ရေး(ကြ) တာမှမဟုတ်ပဲ၊ သဂျီးက ချီးမြှင့်လို့သာလက်ခံရတာ ၊သိပ်တော့ လက်မခံချင်ဘူး(ဂယ်ပြောတာဟုတ်ဘူးနော်)၊
သူက ဒီလိုရေးတယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားတော့ စဉ်းစားစရာပဲနော်။ ငယ်ငယ်ထဲက စာပေမသင်ကြားခဲ့ရသူလား… သူ့ဝန်းကျင်က စရိုက်တွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေက ဘယ်လိုတင်သွင်းပေးလိုက်လဲ။ ဘယ်လိုလူမျိုးက ပေါက်လာတာလဲ…. ဘာကြောင့် ဒီလိုအပြောမျိုးနဲ့ ရေးတာလဲဆိုတာတောင် ချီးစားပြီး သူရေးရင်တောင် ချီးကြိုက်တယ်လို့ ယူဆနေမိပါတယ်။ မတူတဲ့အတွေးအခေါ်ဆိုပေမယ့် ဒီလောက် အောက်တန်းကျပြီး အသိတရားမရှိတာ အတော့်ကို အံ့သြဖို့ကောင်းပါတယ်။ သနားလည်း သနားသွားမိတယ်။ စိတ်ဓာတ်က တိရစ္ဆာန်လောက်တောင် မရှိပါလားလို့လေ။ ဦးနှောက်ကရော ပုစွန်ဦးနှောက်လား….
ကိုယ်တော့ အဲဒီ ပို့စ်ကို ဖတ်ကို မဖတ်ကြည့်ဖြစ်ဘူး။
မျက်စိရှေ့မှာတွေ့နေပေမယ့် ဘယ်လို အဆီအငေါ်မတည့်ကောင် ဘာတွေလာရေးတာလည်းဆိုပြီး ကျော်ဖတ်လိုက်တယ်။
ကိုနီလို ဗျင်းမယ့်သူကလည်း ဗျင်းပေးတာကောင်းပါတယ်ဗျား။
ဆရာနေ ရေ…. ခွေးက ခွေးစကား ပြောတာထက် ကျွန်တော် ကတော့ အဲဒီခွေး ထဟောင်လိုက်တာ
ရင်ထဲ ခွေးအကိုက်ခံရတာထက်ကို နာသေးသဗျ…။ သတင်းသဘောကို ပြောင်းပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် ခွေးကလူကို ကိုက်တာ အခုတော့ သတင်းကြီးကို ဖြစ်နေသပေါ့..။
Member တဦးသည် အခြားMemberအပေါ် ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ.. မှတ်ချက်/ထင်မြင်ချက် ပေးရန် အခွင့်မရှိ……..
ဆိုတော့ .. ဒီနေ့ comment ဖတ်ရတာ စိတ်တော်တော်ရှုပ်သွားတယ်။ ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းကျုံးရမ်းတဲ့ သူနဲ့ နံမည် မတပ်ရုံတမယ် . ဆဲ တဲ့သူနဲ့ .. အသစ်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ဒီရွာ ကို ဒီလို မဟုတ်လောက်ဘူး လို့ ထင်ထားခဲ့ပါတယ်။ လူမြင်လို့ မကောင်းပါဘူးဗျာ ဒီ related post နှစ်ခု ကို ဒီအတိုင်း ထားတော့မှာလား .. သူကြီး ..
တော်ပြီ … ဒါ့ပုံ ပဲထွက်ရိုက်တော့မယ်.. Golden Time ရောက်နေပြီ …
ဟီး.. တော်သေးတယ်. ဒါ့ပုံဆြာ တွေ ဘက် လှည့်မလာ သေးလို့ ..
အဲဒီ ပို့ အတွက် ပြန်ရေးထားတာလား၊ ကောင်းပါ့။
အဲဒီ ပို့ ကိုတော့ အချိန်ကုန် မခံနိုင် လို့ ဖတ်ကို ဖတ် မကြည့် ဘူး။
ပြီးရင် တစ်ဆုံးနင်းပြီး အဲဒီပို့စ်ကို ၀င်တိုက်ပစ်လိုက်ဗျာ။ ဒါဗျဲ။
သာမန် အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုပေါ်မှာ ဝိပဿနာရှု့သလို လိုက်ခံစားရင်တော့မှားမယ်ထင်ပါတယ်
သူ ဗရုပ်သုက္ခလုပ်တာ ကိုယ်က သွားခံစားတော့
သူ့စကားကို ခွေးဇဂါးလို့ နားလည်လိုက်တော့
ကိုယ်က ခွေးဇဂါးနားလည်သလိုလို ဘာလိုလို
( ဝိုးအူး ဝုတ်အူး ယေးယေ့ ဂိန်ညောင်ညောင်…. I love you more than I can say…… )
ကိုကြောင်ကြီးရေ အဲ့ဒါခွေးသံလား ??? ကြောင်သံလားဗျ ???
သူတို့က လုပ်တတ်တယ် မသိမသာ လေးဖက်ထောက်ပြီးဝင် အော်သွားတာ
ရံခါ ပြည်ပနေအတိုက်ခံတွေလည်းလုပ်တတ်တယ် ဆော်သြတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော
အထူးသဖြင့် အားလုံးကို တိုက်တွန်းပါတယ်
သဘောတစ်ခုကို မြင်အောင်ကြည့်ပြီး တုံ့ပြန်ကြဘို့ပါ
Aဘေး က B
B ဘေးက C
C ပြီးတော့ D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
စာရေးဆြာ ၊ ကဗျာဆြာ ပို့စ်ထက်ဆိုးတာ သံဃာ တော်တွေကို ဖာချတဲ့အဆင့်ထိရေးတာ
အဆိုးဆုံး မဟုတ်ဘူးလား ၊ ( မှန်သည်ထင်၍ ဆက်လှော်ပါသည် )
နေ၀န်းတော့ နေ၀န်းပဲ..။ ဒါပေမဲ့ ရဲရဲနီနေတဲ့ အရှေ့ဘက်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကထွက်ပေါ်လာကာစ နေ၀န်းနီ………..
ရက်ရက်စက်စက်ကို ကြိုက်ပြီ ကိုနီရေ…..
အဲဒီလို စကားပြောတဲ့ post ထဲမှာ comment ပေးထားတဲ့ တစ်ချို့သော ရွာသူရွသားများ
ဒီ post ထဲမှာ comment ပြန်ပေးတော့ တစ်မျိုးပါလား ဟရို့……..
သြော် လောက လောက….
dog language academy ကပါ အူနည်း ဟောင်နည်းသင်တန်းကိုရက်တိုနဲ့လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ
သင်ကြားပေးပါ့မယ်။ ခရစ်စမတ်အတွက်လည်း discount ပေးပါ့မယ်…..:P
အင်း ခက်တော့ နေပြီ…။ အပြင်မှာ ဒီစကားက ကလေးတွေဆီရောက်နေလို့ ဘာဖြစ်တာလဲ ၀င်ကြည့်တာ…။ ကလေးတွေ သူတို့ အချင်းချင်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဆန့်ကျင်ဘက်ငြင်းရင် တစ်ယောက် စကားကို တစ်ယောက်က သဘောမတူရင် ဘာပြောကြတယ်ထင်သလဲ…။ ” ဟေ့ကောင်…… မင်း ခွေးစကားမပြောနဲ့” တဲ့လေ………။ အပြောခံရတဲ့ ကောင်လည်း ရယ်ကျဲကျဲ နဲ့ ရန်မဖြစ်ကြဘူး…။ ဒါနဲ့ ဒီကောင်လေးတွေ ဘာ စတိုင်လဲ ဆိုပြီး မေးကြည့်တော့ မှ ” ဦးလေး ပြထားတဲ့ ၀က်ဆိုဒ်ထဲမှာ တွေ့တာ ” လို့ ပြောတော့ …………….. အင်တာနက်ဆိုင် ပိုက်ဆံပြတ်လို့ မထိုင်နိုင်တဲ့ ငတိ လ္ဘက်ရည် မသောက်ပဲ လာကြည့်သွားရပါကြောင်း……… ခင်ဗျာ စကားလုံးက ကလေးတွေ ပါးစပ်ထဲ ရောက်ကုန်ပြီ…။ အစထောင်ထဲ့ သူကလည်း ထောင် ရိုက်ချတဲ့ သူကလည်း ချနဲ့ ဟုတ်တော့ ဟုတ်နေတာပဲ…။ နောက်တော့လည်း ဘာမှမဟုတ် ပြီးသွားမဲ့ဟာ…………………
အင်း …..ရွာထဲမလဲ အနီ ကဒ်ပြတဲ့ ဒိုင်တွေ များသား ….။ တစ်ယောက်ထဲ ကလုပ်နေတာတော့ မဟုတ်လောက်ဖူး…ထင်တာပဲ… ။ ဥရောပ ဘောလုံးပွဲ စဉ်ကြနေတာပဲ…။ ဒိုင်တွေ များတာပြောပါတယ်…။
သူတို့လဲ အလာကား အနီကဒ် ရထားတာ မဟုတ်လောက်ဖူး ။
အပြောအဆိုလေးတွေ ယဉ်ကျေး လှပေသကိုး ။
သြော် . . လောက . လောက သူတို့မှာလဲ လောကီသားမို့ ။
ချိနီယာ ကီး တို့ခင်ဂျာ စိတ်ထိန်းကြပါ ဆဲနည်း ကျမ်း ကုန်ပါတော့မယ်
ခွေးအကြောင်း ဖယ်လို့ ပွက်ဆိတ် အကြောင်းလေးများ ပြောကြပါလား
အော် ချိနီယာ လူကြီးတွေရယ် သူများတွေကျ ပြောတတ်လိုက်ကြတာ
ကိုယ့်သဏ္ဍာန် ကိုယ် မှန်ပြန်ကြည့်ကြဖို့ပါ ၊
နဲနဲတော့ စဉ်းစားရကြပ်သေးတယ် စဖတ်တုန်းက အဲဒီ ပို့စ်ကို သူပဲရေးပြီး ငပျင်းတွေလို့ပြောလို့
အခုလို ပြောလိုက်တော့လည်း ကောင်းတာပဲ ကိုယ်တောင်ရေးမလို့ စာရေးရမှာ ပျင်းနေလို့ မရေးတာ
အခုလို ကိုနေ၀န်းနီ ရေးလိုက်တော့ ကောင်းပါတယ် သိသင့်တယ်ထင်လို့ရေးပေးလိုက်တာပဲ ၇ွာထဲမှာလည်း အမြဲ ဒေ၀ဒတ် ကရှိနေတယ် အမွေများဆက်ခံနေသလားအောက်မေ့ရတယ်
အော် ဒို့ mandalaygazette လဲ ခွေးဝင်ရတာနဲ့ ဓားပြ၀င်ရတာနဲ့
အရင်ကဆို အိမ်တံခါးပိတ်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားလို့ရသေးတယ်။
ခုတော့ သူကြီးနှစ်လုံးပြူး သေနတ်မရှိတော့တာလား
အခုတော့ Lဆိုင်းဇီသီချင်းလို “ဝေခွဲမရလား” ဖြစ်နေပြီဗျို့
mandalaygazette နှစ်ပေါင်းများစွာအောင်မြင်ပါစေ ဆုတောင်းရင်း…………..
hote pa ~
ဒဂလိုမှလည်း ရသစုံမှာ . . အမြဲတမ်း စာသံပေသံ ဖတ်နေရတော့လဲ ပျင်းခြောက်ခြောက်ကြီး ..
ဗဟုသုတ တွေကလဲ သိမ်းဆည်းရတာ များလို့ လျှံထွက်နေပြီ ..
ဂဇက်ကြီးကလဲ တခါတခါ Facebook နဲ့တူလာသလိုလို ..
ခြုံကြည့်လိုက်တော့ ရသစုံ သတင်းစာတိုက်ကြီး လိုပါပဲခင်ဗျာ ..။
mandalaygazette ကို Facebook နဲ့မနှိုင်းပါနဲ့။Facebook က ဘာကောင်းလို့လဲ အားအားယားယား အဖော်အချွတ်ဓာတ်ပုံတင် ပြီးတော့ စောက်စကားတွေပြော ဘာကောင်းလဲ
လာပြန်ပီ စောက်စကားတဲ့ အကျင့်ကောင်းတွေ ဗိုင်းရပ်စ် လို ကူးနေ ။
facebook မကောင်းပါဘူး ပြောတယ်ဆိုတော့ wall ပေါ်မှ ဟိုဟာဒီဟာ အတင်ခံရပီလား ။